Baolina kitra – Amboaran’ny CAF :: Hifandona amin’ny RS Berkane Maraoka ny Fosa Juniors • AoRaha
Baolina kitra – Amboaran’ny CAF Hifandona amin’ny RS Berkane Maraoka ny Fosa Juniors
“Ekipa mbola tsy tena fantatro”, hoy Rasoanaivo Etienne na i Titi, mpanazatra ny ekipan’ny Fosa Juniors FC, taorian’ny nahafantarany fa ny ekipan’ny Renaissance Sportive de Berkane, avy any Maraoka no hihaona amin’izy ireo eo amin’ny
1 /16-n-dalana faharoa amin’ny fiadiana ny amboaran’ny Kaonfederasiona afrikana taranja baolina kitra isan-tarika.
Tontosa, omaly, tany Le Caire, Ejipta, ny antsapaka nahafantarana ireo lalao enina ambin’ny folo tohin’ity fifaninanana kaontinantaly ity. Hotanterahina amin’ny 27 oktobra sy amin’ny 5 novambra ho avy izao ny lalao mandroso sy miverina, ka ny Fosa Juniors no hampiantrano voalohany.
Klioba isan’ireo tsy niatrika ny lalao savaranonando, toy ny Cnaps Sport teo amin’ ny fiadiana ny amboaran’ny CAF ny RS Berkane. Teo amin’ny fihodinana voalohany dia ny ekipan’ny Ashanti Gold avy any Ghana no resin’izy ireo tamin’ny tambatr’isa 4 noho 3 (2 – 0, 2 – 3) ka nahatonga azy ireo mbola nanohy ny fifaninanana.
Mbola tsy tompondaka
Nihintsana avy tany amin’ ny “Total Ligue des Champions” kosa ny Fosa Juniors, rehefa avy nandresy an’ny Pamplemousse SC (1 – 0, 1 – 1) avy any Maorisy saingy nahintsan’ny Tout Puissant Mazembe avy any RD Congo (0 – 0, 3 – 1) teo an-tokonan’ ny lalaom-bondrona.
“Vao ianao no nahenoa­ko an’io. Ekipa mbola vaovao amiko io saingy amin’ny maha maraokana azy dia azo heverina fa ambony dia
ambony ny lentan’ny baolina kitran’izy ireo”, hoy hatrany Rasoanaivo Titi. Laharana fahefatra vonjimaika eo amin’ny fifanina­nam-pirenena maraokana 2019/2020 ny RS Berkane ary manana isa efatra tamin’ireo lalao roa efa vitany. Fandresena tokana sy ady sahala iray no nahazoany izany. Mbola tsy voahosotra ho tompondakan’i Maraoka, Diviziona voalohany mihitsy ity ekipa ity, hatramin’ny taona 1970 niforonany. Efa lefitry ny tompondaka anefa izy ireo tamin’ny taona 1983. Indray mandeha kosa no nandrombaka ny amboaran’i Maraoka, tamin’ny taona 2018, ka nahatonga azy ireo hisolo tena an’i Maraoka tao amin’ny fiadiana ny amboaran’ ny CAF.
Baolina kitra – “Arab Cup of Nation 2020” Sahirana vao nandresy an’i Djibouti ny Barea zandriny
Kitra – « Orange Pro League » Mpilalaon’ny Zanakala FC efatra voasazy
Fitsarana fanadinana bakalorea :: Tsikaritr’ireo mpampianatra ny fisiana taratasim-panadinana tsy nisy soratra
Fandraharahana eto Madagasikara :: Milaza hampiasa vola fa tsy hanao politika ireo vahinin’ny Medef